NextMapping | Fivoarana ho an'ny mpitarika miaraka amin'ny NextMapping ™ Cheryl Cran
NextMapping™ ho an'ny mpitondra
Ny orinasam-panomanana amin'ny ho avy dia noforonin'ireo mpitarika efa ho vonona izay mahay mahavita mitondra fanovana sy fanavaozana amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanovana.
Miara-miasa amin'ny mpanjifantsika izahay mba hamaritana ireo teknika fampandrosoana ho an'ny mpitarika mba ho mora tohina, hivoatra ary hanampy ny fikambanana ho vonona amin'ny ho avy.
Ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny taonjato faha-21 dia tsy ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra, fa ireo izay tsy mahay mianatra, tsy mianatra ary tsy mianatra. ”
Ny ho avin'ny fanalahidy miasa dia manome vinavina, fikarohana ary tondrozotra momba ny fomba hiainana manomboka izao sy amin'ny ho avy.
Manome hevitra mavitrika sy fomba famolavolana manentana ny famolavolana mpitarika mba hananganana fitarihana vonona amin'ny hoavy izay mitondra fanovana mankany amin'ny hoavin'ny asa.
Mamolavola ny hoavinao
Miara-miasa aminao izahay mba hitondra ny vina fanentanam-panahy ho an'ny hoavy amin'ny fiainana. Amin'ny alàlan'ny dingana NextMapping ™ dia manome ny lehilahy sy ny vehivavy izahay amin'ny fitarihana miaraka amin'ny loharanon-karena, fampandrosoana ary dingana azo atao hanampiana anao hamorona ny hoavinao.
Fotoana hivoarana & hamerenana amin'ny laoniny ny fahaiza-mitarika vonona amin'ny ho avy
Mba hivelomana sy hivoatra mandritra izao fotoam-pandrosoana haingana sy haingana izao, ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fitantanana dia mila mamolavola ny fahaiza-manao ilaina, ny fitondran-tena, ny fitaovana ary ny saina.
Sarotra ny sata
Tapitra ny vanim-potoana fikaonan-doha - tsy maintsy miketrika saina ny mpitarika fa mitady foana ny hanamafisana izay tian'izy ireo ho marina amin'ny fampandrosoana fampandrosoana mahomby.
Sariho ny fizarana paikady ho avy
Ny paikady tsara indrindra manomboka amin'ny 'ny antony' ary atombohy amin'ny valiny ho avy ao an-tsaina. Ny mpitarika efa ho avy no mametraka ny fototra mety hananganana ny hoaviny. Sariho ny dingana amin'ny alàlan'ny drafitra folo andro, folo volana na folo taona.
Ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia raisina miaraka amin'ny angon-drakitra misy ankehitriny sy marina ary miaraka amin'ny toe-javatra mety. Ny fomba fikarohana ataonay dia misy ny fanadihadiana, ny media sosialy, ekipa futuriste ary ny mpahay siansa momba ny fitondran-tena, ary koa ireo andiany mifantoka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fitantanana sy ny maro hafa.
Mila ny fanampiantsika amin'ny fametahana sarintany ny fampandrosoana?
Nofonosinay ianao - zahao fa tianay ny mifandray aminao.